လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၃၀၀၀ ကအီဂျစ်တို့သည်အမေရိကနှင့်တရုတ် - အာဖရိကရီဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်ကုန်သွယ်မှုရှိခဲ့သည်
တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 17, 2021
3000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း, အဲဂုတ္တုလူအမေရိကနှင့်တရုတ်နှင့်အတူစီးပွားဖြစ်လင့်များခဲ့
ကျနော်တို့ 1992, မြူးနစ်အတွက်အီဂျစ်ပြတိုက်၌ရှိကြ၏။ Svetla Balabanova, toxicologist နှင့်ရောဂါဗေဒပညာရှင်ဟာ mummy Henoubtaoui, အ XXI မင်းဆက် (1085-950 ဘီစီ) ၏ကပရောဖက်ကို examine ။ အံ့သြမှုနှင့်အတူသူမစာမေးပွဲနီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်း၏သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြသကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခုတော့အဲဒီနှစျခုတ္ထုများသာထက်ပိုမို 2500 နှစ်ကြာပြီးနောက်ခရစ္စတိုဖာကိုလံဘတ်စ်ရဲ့လေ့လာရေးခရီးပြီးနောက်ရှေးခေတ်ကမ္ဘာတွင်ထင်ရှားသောလိမ့်မည်! အီဂျစ် mummy ၎င်းတို့၏ရှေ့မှောက်တွင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။
ကအများကြီးနီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်းဖြစ်ပါသည်: စိတျနှလုံးအသားတင်ရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်ကပထမဦးဆုံးအတည်ပြု, အရာ, အားလုံးမျှော်လင့်ချက်များဆန့်ကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏စီးရီးပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကိုင်တွယ်ခြင်းအမှားကြောင်းယုံကြည်တယ်, Svetla Balabanova သည်အခြားဓါတ်ခွဲခန်းမှနမူနာပေးပို့သည်။ နယူးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကသူ၏ corroborate ။ ဤအချိန်, သံသယခွင့်မပြုပါ: Henoubtaoui ၏ mummy အနည်းဆုံး, ထိုနှစ်ဆယ်ငါးရာစုနှစ်များစွာကြာပြီးနောက်အဲဂုတ်တုပွညျ၌ထင်ရှားနှစ်ခုတ္ထုများ၏သဲလွန်စများပါရှိသည်! ယင်း၏တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖော်ပြစေရန်, Svetla Balabanova ချက်ချင်းအငြင်းပွားဖွယ်ရာမြှင့်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုချက်ချင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ခြိမ်းခြောက်အက္ခရာများနှင့်ပင်ကဲ့ရဲ့အများအပြားလက်ခံ၏။ သူကစမ်းသပ်မှုတိမ်စွပ်စွဲနေပါတယ်။ ကိုလံဘတ်စ်တစ်ဦးစုစုပေါင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမတိုင်မီရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့သမိုင်းပညာရှင်များအတွက်, အမေရိကခရီး။
အခြားဖြစ်နိုင်ခြေစဉ်းစားနေချိန်တွင်နယူးစမ်းသပ်မှုနီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်း Svetla Balabanova ၏ရှေ့မှောက်တွင်အတည်ပြုပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းသူ mummy ပြင်ပညစ်ညမ်းမှုခံယူခဲ့သည်။ သမ္မာသတိရှိသော, အ toxicologist စာမေးပွဲအမျိုးအစားအသစ်လုပ်ဆောင်တယ်။ သူမသည်တစ်မှုခင်းဆရာဝန်အဖြစ်ရဲအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ကွယ်လွန်သူတကယ်မူးယစ်ဆေးစုပ်ယူလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်တစ်ဦးက foolproof နည်းလမ်း။ ရိုးရှင်းစွာအဆံပင်၏ matrix ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဒါဟာသေမင်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အသတ်မရှိလကြာသက်ဆိုင်ရာမော်လီကျူး၏သဲလွန်စဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းသို့မဟုတ်။ ပြီးသားရာဇဝတ်ကောင်ရှုပ်ထွေးဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်သောဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်, ထိုတရားရုံးများကအသိအမှတ်ပြုသည်။ နောက်တကြိမ်သည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရလဒ်သိသာသည်: ဆံပင် Henoubtaoui ၏ matrix ကိုနီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်းများပါဝင်သည်။ ပြင်ပညစ်ညမ်းမှု၏အယူအဆကိုင်ကြပါဘူး။
1976 ခုနှစ်တွင်ထီး II ကို၏ mummy မစ္စစ် Christiane Desroches Noblecourt မြင့်မားဂုဏ်သတင်း Egyptologist နေဖြင့်ပဲရစ်မှယူဆောင်သည်။ ဤသည် mummy ပြည်နယ်၏ဦးခေါငျး၏ဂုဏ်ထူးနှင့်အတူလက်ခံရရှိသည်။ သို့သော်၎င်း၏ဆငျးရဲသားအခွအေနေကြောင့်ပွနျလညျထူထောငျ, ခံယူဖို့ပြင်သစ်၌တည်ရှိ၏။ သည့်အခါနမူနာယူနေကြသည်။ ပဲရစ်၏သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်ဒေါက်တာ Michelle Lescot, ကိုယ်နှိုက်ကပင်သုတေသနပြုခြင်းနှင့်ဆေးရွက်ကြီး၏ဝိသေသ crystals ၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှာပါ။ သို့သော် Ramses II သည်ဘီစီ ၁၂၁၃ တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကိစ္စရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာစက်ဝိုင်း၌အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုနှိုးဆွ။ အရှုပ်တော်ပုံ၊ ၎င်းမှာနောက်ဆက်တွဲဆက်ဆံမှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ရှေးဟောင်းသမိုင်း၌အမေရိကန်နှင့်မြေထဲပင်လယ်အကြားဆက်နွယ်မှု၏ယူဆချက်သည်သမိုင်းပညာရှင်များ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်မှားယွင်းသည်။ ၎င်းသည်အမှားတစ်ခုဖြစ်ရမည်။
"mummification ၏ထိုအချိန်က, သူ့ရင်ဘတ်အများအပြားဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေးနှင့်ပြည့်စုံလေ၏: ဆေးတစ်နှောင်းပိုင်းတွင်အသုံးပြုသော" သို့သော်သူ့စာအုပ်သိုးထီး II ကိုအတွက် Pygmalion အတွက် 1996 ထုတ်ဝေစစ်မှန်သောပုံပြင်, Christiane Desroches Noblecourt ရေးသားခဲ့သည်၏ hash " ရင်ဘတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းနံရံများကိုဆန့်ကျင်တွေ့ရှိခဲ့ Nicotiana L. ၏အရွက်, လာမယ့်နီကိုတင်းသိုက်မှ, mummification ၏ဆက်ဆက်တစ်ခေတ်တည်း, ဒါပေမယ့်ပြဿနာကဒီစက်ရုံအဲဂုတ္တုပြည်၌မသိသောကြောင့်, semble-t-က။ "(သိုးထီး II ကို, စစ်မှန်သောပုံပြင်, 50 စာမျက်နှာ) ။
အဘယ်အရာကိုအသုံးပြုမှုအတွက်အီဂျစ်ဆေးရွက်ကြီး? Svetla Balabanova ကသူ၏သုတေသနဆက်လက်ပြီးအံ့သြစရာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုဖန်ဆင်း: ဆံပင် matrix ကိုတွေ့ရှိနီကိုတင်းပမာဏကိုပုံမှန်အားဖြင့်စားသုံးသူအသေခံစေပြီသင့်သောကြီးမားတဲ့စားသုံးမှု, ထေူ၏။ စားသုံးသူပြီးသားအသေဖြစ်၏မဟုတ်လျှင်။ ထို့နောက်အခြားယူဆချက်ထုတ်ဝေ: ဆေးရွက်ကြီးဟာ mummification ဖြစ်စဉ်ကိုဝင်ကြ၏။
ဒါဟာအမြဲယဇ်ပုရောဟိတ်အားဖြင့်လျှို့ဝှက်ထား, ထိုသို့နေဆဲယနေ့ဒီစစ်ဆင်ရေး၏အသေးစိတျမရှင်းလင်းကြောင်း, အသုံးပြုခဲ့ကြသည်အထူးသဖြင့်အဘယျသို့တ္ထုများခဲ့သည်။ သို့သော်ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဘီစီမေးဆေးရွက်ကြီးအဲဂုတ္တုလူတို့သည်ပေမယ့်အဲဂုတ္တုပြည်၌ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုမျက်နှာသာ၌ဟောပြော? ဒါဟာအဲဂုတ္တုလူတို့သည်အဓိကအားဖြင့်၎င်းတို့၏ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများအဘို့, ထိုကဲ့သို့သောအနုဆေးသီး, လျှော်, ဘိန်းနှင့် hashish အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးလူသိများသည်။ သူကကောင်းကောင်း, ရှေးကာလ၌တူညီသောသက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပင်တစ်ပင်, ဆေးရွက်ကြီး၏ရင်းနှီးသောဆွေမျိုး, တည်ရှိခြင်းနှင့် Over-စားသုံးမှုကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားရာနိုင်တယ်။ ဒါဟာဆေးရွက်ကြီးတခြားနေရာထံမှလာသည်ဟုယူဆရသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာ?
ဤသည်စက်ရုံတောင်အမေရိကမှဇာတိဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ငါတို့သည်လည်းအမျိုးပေါင်း Oceania နှင့်ပိုလီနီးရှားကိုရှာပါ။ အဘယ်အရာကိုဆေးရွက်ကြီးအရှေ့ဖျားဒေသ, အိန္ဒိယ, ပါရှားနှင့်ပိုတေးမီးယားဖို့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းသည်အောက်ပါပြီးနောက်, အီဂျစ်ရောက်ရှိကြောင်းကိုခဲ့သလား ဒါဟာပြီးသား, ဤဝေးလံသောမြေများနှင့်အတူအချိန်, ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုမှာတည်ရှိကြောင်းဆိုလိုပေသည်။ ဤသည်ကိုသူတို့ Luxor တစ်ခုအီဂျစ် mummy အတွက်ပိုး၏သားကိုတွေ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကထောက်ခံသည်။
ဒါပေမဲ့ဒီပိုးသာတရုတ်ထံမှလာနိုင်ဘူး။ နှင့်ကိုကင်း? ဆေးရွက်ကြီး၏စကားဝှတစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေစက်ရုံ၏အယူအဆနှင့်အတူကနဦးတုန့်ပြန်ရှာတွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်အရှေ့ကတင်သွင်းနိုင်လျှင်, ဤနှစ်ခုရှင်းလင်းချက်ကိုကင်းသက်ဆိုင်သည်မဟုတ်။ အဲဒီမှာအာဖရိကအနီးကပ် coca စက်ရုံများအတွက်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှမူးယစ်ဆေးဝါးများဆံ့။ ရုက္ခဗေဒပညာရှင်များသည်, အာဖရိကမှာအမေရိကန်ကိုကာကိုလာ၏အနီးအနားရှိစက်ရုံ၏ရှေ့မှောက်တွင်, ရှေး၌, ယူမှားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်, အချိန်ရှိမြေထဲပင်လယ်နှင့်အမေရိကတိုက်အကြားဆက်ဆံရေးခဲ့သလဲ ဒါဟာဘရာဇီး, ရောမရဲလှေကနေအိုး၏ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သင်္ချိုင်းအပါအဝင် native အမေရိကန်ဆိုဒ်များ, ကောင်းသောတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်သတင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, La Venta နှင့် San Lorenzo ထဲမှာ, နဝမရာစုနှင့်ဒွါဒသမရာစုဘီစီအသီးသီးရက်စွဲပါနှစ်ခုအဓိကမြို့ကြီးများ Olmec, အဘယ်သူ၏အင်္ဂါရပ်များအဖြစ်ထင်ရှားစွာ Negroid ဖြစ်ကြောင်းဧရာအကြီးအကဲများဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်အာဖရိက-အမေရိကန်သူတို့အဲဒီအခြိနျမှာကိုသိ? အတ္တလန္တိတ်၏တစ်ဖက်သို့မဟုတ်အခြားတွင်က sarcophagi အတွက်ကိန်းဂဏန်းများနေရာဓလေ့ထုံးတမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အီဂျစ် shaouabtis အစားသေမင်း၏အိမ်မှုဝေယျာလုပ်ဖို့ထင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ကျနော်တို့ကအမေရိကန်ရုပ်၏ function ကိုမသိရပါဘူး။ နောက်ထပ်တိုက်ဆိုင်မှု: အဖိုနီးရှား, ထို Native Americans တွေလိုပဲကွယ်လွန်သူမရဏာနိုင်ငံအားမိမိကျမ်းပိုဒ်ပေးဆောင်နိုင်အောင်, ကျောက်စိမ်း၏ဒင်္ဂါးပြားသို့မဟုတ်ပုတီးချော်။
အဆိုပါလူမျိုးသုံးမျိုးသည်မာယာနိုင်ငံ၊ ကမ်ပိုချီရှိပန်းအိုးတစ်ခုတွင်သင်္ချိုင်းဂူမှခေါ်ဆောင်သွားသောပန်းအိုးသည်ဇာတ်ကောင်အမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိသည်။ အချို့မှာကြေးနီအရေပြား၊ အချို့မှာအဖြူရောင်အသားအရေရှိပြီး၊ အမေရိကန်တိုင်းရင်းသားများသည်ဤအသွင်အပြင်သုံးခုကိုအမျိုးသားများနှင့်မတွေ့ဘဲဤအရောင်သုံးမျိုးကိုမည်သို့စိတ်ကူးနိုင်မည်နည်း။
ရှေးဟောင်းအတွက်အရောင်းအဝယ်ပြုရာတွင်ဆက်ဆံရေး၏တည်ရှိမှုပဟေဠိ၏ငွေပမာဏကိုမှအဖြေကိုဆောင် ခဲ့. , အလေးအနက်သုတေသနဒီဦးတည်ချက်အတွက်ကောက်ယူစေမျှော်လင့်မယ်။ သူမသည်ဘာသာရပ်ဆီသို့လင်းမှုမရှိသဘောထားကိုချမှတ်ရန်အများအပြားရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေမှတပါးစွပ်စွဲပါတယ်။ ဒါဟာစီးပွားရေးအရအသွားအလာပစိဖိတ်ကိုဖြတ်ပြီးလည်းရှိဟုဆိုကာပင်နောက်ထပ်တတ်၏။ အဆိုပါသက်သေတရုတ်တှငျတှေ့အမေရိကမှဇာတိချိုမြိန်အာလူး, ဖွငျ့ဖြစ်ပါတယ်။ မြေပဲများအတွက်တူညီ။
မာတင် Bernal, Cornwell ၏တက္ကသိုလ်မှသမိုင်းပညာရှင်ကိုလံဘတ်မတိုင်မီအရောင်းအဝယ်ပြုရာတွင်လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်ယူဆချက်အတော်လေးဖွယ်ရှိကြောင်းကိုလည်းစဉ်းစားပါ။ အများအပြားသမိုင်းပညာရှင်တို့ကအခိုင်အမာအဖြစ်ကိုသူ့အဘို့, တိုးတက်မှု, သေချာပေါက် linear မဟုတ်ပါဘူး။
SOURCE မှ: http://www.mysteresdumonde.fr/categ/archeologie/38-pharaons-en-amerique.html
အခမဲ့နှင့်အခမဲ့စွမ်းအင်ကိုတီထွင်ခဲ့သူမေ့လျော့ပါရမီ Nikola Tesla
အာဖရိကလူမည်းမှာ Eid al-Adha, Tabaski ကိုဘာကြောင့်ခေါ်ရတာလဲ။
မူပိုင်ခွင့်© 2022 Afrikhepri
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကဤစာမျက်နှာကို ကျေးဇူးပြု၍ မျှဝေပါ။ မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကိုဒီဆိုဒ်မှာတင်နိုင်တယ်။
ဤ ၀ င်းဒိုးသည် 10 စက္ကန့်အတွင်းအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်